ငါဘယ်လိုသင့်ရဲ့ PC မှာထံမှ WINDOWS7ကိုဖို့ကာစီနိုမီးတောင်ကိုဖယ်ရှားကြပါ - WINDOWS ကို - 2019
Windows7ကိုမှကို PC ကနေ "ကာစီနိုမီးတောင်" ၏ဖယ်ရှားရေး
တချို့ကအသုံးပြုသူများ browser များ surfing တဲ့အခါမှာသူတို့မကြာခဏက်ဘ်ဘရောက်ဇာထဲမှာအိမ်မှာစာမကျြနှာကဒီသယံဇာတ၏အဓိကစာမျက်နှာကိုပြောင်းလဲကြနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကြော်ငြာမပါဘဲတစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာတောင်မှသာမန်စစ်ဆင်ရေးထဲမှာပေါ်လာမှစတင်ဖို့, လောင်းကစားရုံကြော်ငြာ "မီးတောင်" နဲ့က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖွင့်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ကြ အင်တာနက် access ကို။ ဤအမှုအလုံးစုံကို malware "ကာစီနိုမီးတောင်" နဲ့ကူးစက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏စစ်မှန်သောအရိပ်လက္ခဏာပါပဲ။ Windows7ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံရှာဖွေကြပါစို့။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေကို "ကာစီနိုမီးတောင်" ကိုဖယ်ရှားမယ့်နည်းလမ်းတွေရှာရန်မလိုအပ်ရှိကွောငျးကို, သင်ရုံဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ဖော်ထုတ်ရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ PC မှာဒါမှမဟုတ်လောင်းကစားရုံ (သို့မဟုတ်အခြားသံသယဖြစ်ဖွယ် Web-အရင်းအမြစ်) ၏ site ကိုလာရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်, ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်ချုပ်ထားပြီးရသောဆော့ဖ်ဝဲ, ကို install ပြီးနောက်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့လိုအပ်:
စိတ်မချရရင်းမြစ်များမှ application များ install လုပ်မထားပါနဲ့။
Third-party software ကိုသုံးပြီးဖယ်ရှားရေး
သို့သော်ကံမကောင်းစွာပင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. အမြဲသိမ်းဆည်းခံရဖို့ထွက်လှည့်ဘူး။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြော်ငြာနှင့်အတူကူးစက်ပြီးနောက် "ကာစီနို Vulcan" ၏ဖယ်ရှားပစ်ရပုံကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ကအုပ်စုနှစ်စုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်: Third-party software များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သာစနစ်က tools များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ။ Next ကိုကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအကြောင်းပိုမိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာကျွန်တော် Third-party အစီအစဉ်များကို အသုံးပြု. နည်းလမ်းများစဉ်းစားပါ။
Method ကို 1: AdwCleaner
AdwCleaner - "ကာစီနိုမီးတောင်" အပါအဝင်ကြော်ငြာဗိုင်းရပ်စ်, ဖယ်ရှားပစ်ရဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာအတိအကျခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအလားတူအမျိုးအစားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောအထူးအစီအစဉ်များအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
AdwCleaner စတင်ပါ။ တံဆိပ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Scan ကို".
ကြော်ငြာဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အခြားအလားအလာမလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်များအတွက် system ကိုစကင်ဖတ်ဖို့စတင်ပါ။ သူတို့ကဖိုင်များ, ဖိုလ်ဒါ, ဘရောက်ဇာကို, system registry က, အ heuristic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထွက်ယူသွားတတ်၏ check လုပ်ထားပါလိမ့်မည်။
AdwCleaner window တွင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာကအရာဝတ္ထုအခါအားလျော်စွာအဆိုပါလောင်းကစားရုံ "မီးတောင်" ကြော်ငြာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် run ဖြစ်ပါသည်, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိအပါအဝင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းများကို၏စာရင်းတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြကြသည်။ အကယ်. သို့သော်ပြသထားသောပစ္စည်းများအချို့နှင့် ပတ်သက်. , သငျသညျကိုသူတို့အန္တရာယ်မဟုတျပါနှငျ့သငျအခြို့သောတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းသေချာသည်ဤအမှု၌, မှတ်စုတစ်ခုနှင့်အတူသူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဆနျ့ကငျြအမှန်ခြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသောပစ္စည်းများထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Clear ကို".
ဒါကြောင့်အပြေးသမျှသောပွင့်လင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုကယ်တင်နှင့်ပိတ်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိပေးပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်သတင်းအချက်အလက် box ကို။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့အဆုံးသတ်ခြင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြလိမ့်မည်, နှင့်မဆိုမသိမ်းရသေးသောဒေတာကိုဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ အားလုံးတက်ကြွစွာ applications များ၏ပြီးစီးလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပြတင်းပေါက်၌ button ကိုနှိပ် "အိုကေ".
အဲဒီနောကျ unclosed အစီအစဉ်ကိုအတင်းအကြပ်ပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည်, နှင့်ဖျက်မှု AdwCleaner စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ပြီးနောက်စစ်ဆေးမှုများစာရင်းထဲတွင်မှတ်သားခဲ့ကြကြောင်း element တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။
ဖယ်ရှားရန်ပြီးနောက်သင်နောက်ဆုံးသန့်ရှင်းရေးအဘို့သင့်ကို PC ကို restart လုပ်ပါဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်သည့်ပြီးပြည့်စုံသောပေးတဲ့ dialog box ကို activated ဖြစ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Restart Now".
ထို့နောက်ကွန်ပျူတာသည် Restart, နှင့် "ကာစီနိုမီးတောင်" ဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်အပါအဝင်အပေါငျးတို့သမလိုချင်တဲ့ applications များ, ပေါ်မှာလှည့်။ ထို့အပြင်အလိုအလျောက်စတင်ပါ "Notepad"အဘယ်မှာရှိစာသားပုံစံအတွက် AdwCleaner utility ကိုသန့်ရှင်းရေးအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဆံ့မည်ဖြစ်သည်။
Method ကို 2: Malwarebytes Anti-Malware
သငျသညျ adware ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်နှင့်အတူအောက်ပါအစီအစဉ်မှာ "ကာစီနိုမီးတောင်" Malwarebytes Anti-Malware ဖြစ်ပါတယ်။
Malwarebytes Anti-Malware စတင်ရန်။ ခလုတ်ကိုအပေါ်အဓိက window ကိုကလစ်အတွက် "တစ်စကင်ကို Start".
system scan ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုး "ကာစီနိုမီးတောင်" ကူးစက်လျက်ရှိသည်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောခြိမ်းခြောက်ခြင်း, ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။ စနစ်ကမှတ်ဥာဏ် startup element တွေကို registry ကို, ဖိုင်စနစ်, နှင့် heuristic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထွက်ယူသွားတတ်၏ဓြှု။
ရလဒ် scan ဖတ်ပြီးနောက်ပြသလျက်ရှိသည်။ ယခင်အမှု၌ရှိသကဲ့သို့, သင်ယုံကြည်မှုဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးများ၏ဒြပ်စင် uncheck လုပ်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "ဟုအဆိုပါ quarantine မှရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းများ Add".
သူတို့မဆိုအလွန်အန္တရာယ်များသောမည်မဟုတ်ရှိရာစနစ်၏အထူးဧရိယာ၌ tagged အရာဝတ္ထုရွေ့လျားဘို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, (quarantine) ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးပြီးနောက်အားလုံး malware ကို quarantine သို့ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းဆကျသှယျထားတဲ့အတွက်ပြတင်းပေါက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အခုတော့သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လောင်းကစားရုံ "မီးတောင်" ရှည်ပြသကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာတွေကိုမသင့်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: Malwarebytes AntiMalware လျှောက်လွှာကို အသုံးပြု. ဖယ်ရှားခြင်းလောင်းကစားရုံမီးတောင်ကြော်ငြာ
ဒါဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး adware "ကာစီနိုမီးတောင်" ကနေလက်စွဲစာအုပ်သန့်ရှင်းရေးစနစ်ကပိုပြီးခက်ခဲအထူးအစီအစဉ်များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူထက်ကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်များကိုတစ်ဦး Registry ကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဖယ်ရှားရေးဖျော်ဖြေကစနစ်တည်ရှိလျှင်, ဗိုင်းရပ်စ်ကိုယ်နှိုက်က executable file ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် browser မှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်၏ဖယ်ရှားရေးအောင်အများအပြားအဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်ရပါမည် "Task Scheduler".
အဆင့် 1: သန့်ရှင်း browser များ
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်ကသူတို့က default တန်ဖိုးများဖို့ browser setting ကို reset ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမတော့ကို Google က Chrome ကို web browser မှာဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတစ်ဦး sequence ကိုကြည့်ရှုပါ။
ပစ္စည်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ Google Chrome ကို (သုံးဒေါင်လိုက်စီစဉ်ပေးစက်) တွင်တစ်ဦး menu ကိုဖွင့်လှစ်။ ဖွင့်လှစ်သောမီနူးထဲမှာ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Settings" ကို.
အဆိုပါ settings စာမျက်နှာကိုဖွင့်။ သင်တစ်ဦးကို item ပေါ်မှာ၏အလွန်အောက်ခြေဆင်း သွား. , ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် "အပို".
ဒါကအပိုဆောင်း setting များကိုများစွာဖွင့်လှစ်။ ပြတင်းပေါက်အောက်ကိုဆင်းနှင့်တံဆိပ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "Reset".
ထို့နောက်တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ကိုသငျသညျကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်ရှိရာ, ဖွင့်လှစ် "Reset".
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအပြင်အဆင်များ, ကို default တန်ဖိုးများကို reset လိမ့်မည်:
အားလုံး tabs များဖြုတ်ရန်ဖြစ်မည်, ချဲ့ထွင်မှုရပ်တန့်။ ထို့အပြင် cache ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဖယ်ရှား cookies များကိုပေမယ်စကားဝှက်တွေနဲ့ bookmarks ကိုနဂိုအတိုင်းဆက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခုတော့က default, ထို Mozilla Firefox browser ကိုအားဖြင့် parameters တွေကို reset ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်းစားပါ။
သုံးသေးငယ်တဲ့လိုင်းများပုံစံ icon တစ်ခုပေါ်ကလစ်အချင်းချင်းဒေါင်လိုက်ဆွေမျိုးစီစဉ်ခဲ့သည်။ သူမလည်း, Chrome ကို၏အမှု၌သကဲ့သို့, toolbar ကို၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ ဖွင့်လှစ်သောမီနူးထဲမှာ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အကူအညီ".
သင်တစ်ဦးအနေအထားပေါ်ရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာ displays sub-menu ကို "ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့သတင်းအချက်အလက်များ".
စာမျက်နှာအသစ်တခု tab ကိုဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါလုပ်ကွက်များအတွက်ရှာဖွေရေး၎င်း၏အထက်ညာဖက်မှာတော့ "Firefox ကိုဖွင့်သတ်မှတ်"။ အထဲတွင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Clear ကို Firefox ရဲ့ ... ".
ဒါကသတိပေးသင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုကြောင့် default အနေနဲ့ browser ကိုသုံးစွဲဖို့ကို set up အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ချဲ့ထွင်မှုကိုဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြသသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးပေးတဲ့ dialog window ကိုဖွင့်လှစ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Clear ကို Firefox ရဲ့".
Browser ကိုစင်ကြယ်စေ, နှင့်၎င်း၏ setting များကို default settings ကိုမှ reset နေကြသည်။
အခုတော့ရဲ့အော်ပရာရှိဆက်တင်ကို reset ဖို့ဘယ်လိုစကားပြောကြကုန်အံ့။ ယခင်ဘရောက်ဇာထက်ကနည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးစေပါ။ ဤသည်တစ်ခုတည်းပြန်ညှိမှုခလုတ်ကိုမတည်ရှိပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သီးခြားစီအဓိက parameters တွေကို reset နှင့်ချဲ့ထွင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကလစ်နှိပ်ပါ "Menu ကို" နှင့်ပစ္စည်းများကို select "Settings" ကို.
ပေါ်လာသော window ၏လက်ဝဲဘက်ခြင်း, အပိုင်းကိုသွား "လုံခြုံရေး".
အဆိုပါ parameter သည်အုပ်စုတစ်စု "Privacy" စာနယ်ဇင်းများ "Clear ကို browsing history".
drop-down list ကနေဖွင့်လှစ်ပြတင်းပေါက်မှာကာလကို select "အစကတည်းက"။ အောက်တွင်ကြီးသားအပေါင်းတို့, parameters တွေကိုမှလာမယ့်အမှတ်အသားတစ်ခုထားတော်မူ၏။ သာကို item mark မနေပါနဲ့ "စကားဝှက်"။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Clear ကို browsing history".
သို့သော်ရှိသမျှသောမဟုတ်ဘူး။ အတော်လေးဖြစ်နိုင်အဖြစ်ကျနော်တို့က "မီးတောင်" ကြော်ငြာလောင်းကစားရုံများပစ်လွှတ်မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းဒြပ်စင်ကောက်ချက်ချနေသည်, မည်သည့် installed Add-ons တွေကို disable လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်တဖန်, အကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Menu ကို" နှင့်ကျောက်စာပေါ်ရွှေ့ "Extensions"။ နောက်ထပ်စာရင်းထဲတွင်အတိအကျနာမည်တူနှင့်အတူကို item ပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ။
ပြတင်းပေါက်များတွင်တိုးချဲ့လုပ်ကွက်၏ပုံစံအတွက်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ဖြတ်ကူးပါလိမ့်မယ်။ တိကျသောထို့အပြင်ပယ်ဖျက်ဖို့သူကကလစ်နှိပ်ပါ။
Next ကိုသငျသညျကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အရေးယူအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ, တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ကို "အိုကေ".
အလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို browser အတွက်အပေါငျးတို့သ extension တွေနဲ့အတူအမှုကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကတိကျတဲ့ထို့အပြင်ကြောင်းသံသယရှိလျှင်ဗိုင်းရပ်စ်ကြော်ငြာများ၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသာယင်း၏ဖယ်ရှားရေးအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားစေနိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: ဘယ်လိုအော်ပရာ browser ကို reset ပါဘူး
က Internet Explorer - အခုတော့ OS ကိုစချုပ်အဖြစ် Windows7နှင့်အတူတိုင်းကို PC ပေါ်မှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောဘရောက်ဇာကို, ကို reset ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။
ဂီယာ၏ပုံစံအတွက်အိုင်ကွန် toolbar ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။့dropdown menu မှာ, ကို select "Internet Options ကို".
window ကို Web browser ဂုဏ်သတ္တိများဖွင့်လှစ်။ အပိုင်းရွှေ့ရန် "အဆင့်မြင့်".
အဆိုပါပြသကလစ်စာအိတ်ထဲမှာ "Reset ... ".
ဒါဟာသင် button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အရေးယူအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ရှိရာပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ် "Reset"သို့သော်မှီ, parameter သည်အနားမှာ checkbox ကိုတစ်ဦးအမှတ်အသားသတ်မှတ်ထား "ပုဂ္ဂိုလ်ရေး setting များကိုဖျက်ပစ်ပါ".
parameters ကို default တန်ဖိုးများကို reset လိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌လျော့နည်းလူကြိုက်များ browser များမဖြစ်နိုင်ပါပေမယ်ကိုင်တွယ်ယုတ္တိဗေဒနဲ့တူအားလုံးကို web browser များအတွက်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဖို့ settings ကို reset ဖို့ခြေလှမ်းတွေကိုဖော်ပြပါ။
အဆင့် 2: တံဆိပ်များ Check
setting များကို Reset - သောသူအပေါင်းတို့သည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ဖို့ကိုသုံးပါသောတံဆိပ်များစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်: တဲ့အခါမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု၏ဤအမျိုးအစားကအလွန်ဘုံအခြေအနေကတည်းကသူတို့လောင်းကစားရုံ site ကို "မီးတောင်" ဖြေရှင်းခြင်းရှိမရှိထူထောင်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, (right-clickPKM) ကို Desktop ပေါ်မှာ browser ကိုအိုင်ကွန်တွင်ပြီးတော့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Properties ကို".
ဒါဟာ window ကိုဖြတ်လမ်းဂုဏ်သတ္တိများဖွင့်လှစ်။ လယ်ပြင်၌အာရုံစိုက် "အရာဝတ္ထု"။ သငျသညျရှိသွားလျှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအဲဒီ settings တွေကိုမဆိုမှတ်ပုံတင်ရန်ခဲ့ပါဘူးအောက်ပါများမှာ EXE နှင့်ပိတ်ပွဲ quotation အဆိုအခြားဒေတာအဲဒီမှာမဖြစ်သင့်ခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ ဒီကမ္ပည်းအချို့သောဒေတာ, အလောင်းကစားရုံ site ကိုမှအထူးသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားရှိပြီးနောက် အကယ်. "Vulcan", ဤ icon များ၏ဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲမှုများအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်နှင့်ဖွဲ့ခဲ့ကြတာကိုဆိုလိုတယ်။
လယ်၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့ကိုဒေတာဖျက်ပစ်ပါ "အရာဝတ္ထု" အဆိုပါ quotation အ၏ညာဘက် extension ကို EXE ပြီးနောက်ခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ စာနယ်ဇင်းများ "Apply" နှင့် "အိုကေ".
လိုအပ်ခဲ့လျှင်တူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသမျှသော browser များ၏တံဆိပ်များနှင့်အတူအမှုကိုပြုရပါမည်။
အဆင့် 3: executable file ကိုဖျက်ပစ်ပါ
အပြောင်းအလဲတွေ "ကာစီနိုမီးတောင်" ကိုသာ browser မှာခဲ့နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် clean up လုပ်ဖို့အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖောင်းပွဖယ်ရှားပစ်ရရန်လုံလောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်မကြာခဏဒါရိုးရှင်းဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်ပြောင်းလဲမှုများအောင်, စနစ်အတွက်၎င်း၏ executable file ကို register လုပ်သွား "Task Scheduler" ဒါမှမဟုတ် registry ကို။ နှင့်အတော်လေးမကြာခဏကအတူတူတပြင်လုံးကိုအရာစေသည်။ ပထမဦးစွာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ executable file system ကို tools တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံထွက်ရှာပါ။
next ကိုအုပျစု "Programs ကို" စာနယ်ဇင်းများ "အစီအစဉ်များကို Remove".
windose 7. ကြည့်ပါအတွက် applications များစကားတို့ကို "လောင်းကစားရုံ" ဒါမှမဟုတ် Cyrillic နှင့်လက်တင်အက္ခရာစဉ်တွေအဖြစ် "မီးတောင်" ပါရှိသည်ရာ၏နာမ၌ applications များကို item ၏ပြသစာရင်းထဲတွင်ရှာတွေ့မှ uninstall လုပ်ဘို့စံကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုကိုမတှေ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကြော်ငြာနှင့်အတူပြဿနာကိုမပေးဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့သည်ထင်ရှားရှိသည်ဟုလျှင်, နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. လယ်ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Installed".
သငျသညျဤအမှုကိုဤနည်း, နောက်ဆုံး installed အစီအစဉ်များကိုစာရင်းထိပ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဂရုတစိုက်သင်ထည့်သွင်းထားသောဘူးသောသူတို့ကိုအပလီကေးရှင်း detect နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးထုတ်ဝေသူမရှိဘဲအစီအစဉ်ကိုအာရုံစိုက်။ သင်တစ်ဦးသံသယဖြစ်ဖွယ်အရာဝတ္ထုကိုရှာဖွေပါကဖြုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Scroll သည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်စာနယ်ဇင်း "ကိုဖျက်" အဆိုပါ panel ကိုအပေါ်။
ထို့နောက် window တွင်ပြသပါလိမ့်မည်သည့်အကြံပြုချက်များအရသိရသည်အားလုံးလိုအပ်သောဖယ်ရှားရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်။
အဆင့် 4: ပြဿနာဖယ်ရှားရေး
သို့သော်မကြာခဏဗိုင်းရပ်စ် "ကာစီနိုမီးတောင်" လည်းဘရောက်ဇာတစ်ခုဟာ executable ဖိုင်သို့မဟုတ်ဆက်စပ် extensions တွေကိုဒေါင်းလုပ်၏သည် Periodic တာဝန်ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကို web browser များသန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ် application ကိုဖျက်ပစ်မှသာယာယီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျစစျဆေးသငျ့သညျ "Task Scheduler" သံသယဖြစ်ဖွယ် application များအတွက်။
သွားပါ "Control Panel ထဲက" မှတဆင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Start" အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တူညီသောထုံးစံ၌။ ယခုမူကားပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "စနစ်နှင့်လုံခြုံရေး".
ကိုကြည့်ပုံပေါ်သောစာရင်းထဲတွင် "Task Scheduler".
ဒါဟာအစဝင်းဒိုးကိုသုံးပြီး activated နိုင်ပါသည် "Run ကို"။ နာရီမျက်နှာပြင် ဦးဝင်း + R ကို နှင့်ရိုက်:
"Task Scheduler" စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒီ window ၏လက်ဝဲ pane ထဲကကို, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Scheduler ကိုစာကြည့်တိုက် ... ".
ပြတင်းပေါက်၏ဗဟိုယူနစ်ရဲ့ထိပ်မှာစနစ်အတွက်စီစဉ်ထားခဲ့ကြသမျှသောအလုပ်များကိုစာရင်းတစ်ခုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဒြပ်စင်၏အနှစ်သာရနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းအသေးစိတ်တူညီပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်အလုပ်များကိုခွဲဝေချထားအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိမည်သည့်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲစီစဉ်ထားသို့မဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာကိုသွားပါသောသံသယဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းများ, ထွက်သည်ကိုကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့်အပေါ်တစ်ဦးသံသယတာဝန်ကလစ်ဖယ်ရှားပစ်ရန် PKM နှင့် menu ကနေရှေးခယျြ "ကိုဖျက်".
ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များ၏လေးနက်မှုကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ဘယ်မှာပေးတဲ့ dialog box ကို Run "Yes" ကို.
အဆင့် 5: registry ကိုပျော်စေ
ဒါပေမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး "ကာစီနိုမီးတောင်" ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, နှောင့်အယှက်ကြော်ငြာခြင်းပပျောက်ဖို့အခက်ခဲဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုစနစ် registry ကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်အဘယ်မှာရှိအန္တရာယ်ရှိတဲ့ post ကိုအပိုင်းကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာမှားကိုပယ်ဖျက်အပြည့်အဝမှုစနစ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်သည်အထိဆိုးရွားအကျိုးဆက်များ registry ကိုကို item ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်မသာသော။ ဆိုတဲ့အချက်ကို ထို့ကြောင့်, လုံလောက်သောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲပိုကောင်းဒီကဏ္ဍကို manual ကိုင်တွယ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်အပေါ်လုပ်ဆောင်အားလုံးသည်လုပ်ရပ်တွေကို။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အလုပ်စတင်မှီ, operating system ကိုအမှတ်သို့မဟုတ်ယင်း၏ backup လုပ်ထား restore အတွက်စောင့်ရှောက်မှုယူပါ။
လျှောက်ထား ဦးဝင်း + R ကို။ Beat:
ဖွင့်လှစ် "Registry Editor ကို".
လက်ဝဲ pane ထဲကကိုတည်ရှိသော directory များရွေ့လျားခြင်းအားဖြင့်, ထိုဗိုင်းရပ်စ်ကုဒ်ဖြင့် setting များကိုပါဝင်သောသံသယ registry ကိုဌာနခွဲကြည့်ရှုပါ။ ဤအပိုင်းကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ PKM နှင့် menu ကနေရှေးခယျြ "ကိုဖျက်".
သငျသညျကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုပယ်ဖျက်အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်ရှိရာတစ်ဦးကပေးတဲ့ dialog box ကိုဖွင့်လှစ် "Yes" ကို.
ကြောင်းနီးစပ်ပြီးနောက် "Registry Editor ကို"စံအနီးကပ် icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
အကျိုးသက်ရောက်မှုယူပြောင်းလဲမှုများ, သင် device ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကလစ်နှိပ်ပါ "Start"။ ထိုအခါ၏ညာဘက်ရန်တြိဂံအပေါ်တစ်ဦးကလစ်နှိပ်ယူ "Down Shut"။ မီနူးမှာတော့ရှေးခယျြ "ပြန်လည်စတင်ပါ".
အဆိုပါ PC ကို၎င်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပို့စ်ပါရှိသည်သော registry key ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ကလုံးဝဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး "ကာစီနိုမီးတောင်" အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်စနစ် tools များ အသုံးပြု. အဖြစ်ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတခုအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူမဟုတ်လျှင်, ငါတို့သည်ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ပထမဦးဆုံး options နှစ်ခုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ အစွန်းရောက်အမှု၌, သငျသညျကို manually, browser ကိုရှင်းလင်းမဆိုသံသယအစီအစဉ်များကို uninstall လုပ်လိုက်နဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါသည် "Scheduler ကို"။ ဒါပေမယ့်သင့်လျော်သောအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံမှာအသုံးပြုသူ၏ရှေ့မှောက်တွင်မရှိဘဲ registry ကိုအတွက်လက်စွဲအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။